आज मिति २०७७, असोज २९ गते बिहिबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित) – Nepali news portal
आज मिति २०७७, असोज २९ गते बिहिबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
२९ आश्विन २०७७, बिहीबार ०७:३० October 15, 2020 काठमाडौं डेष्क
मेष : स्वस्थ रहनको लागि आहार नियन्त्रणमा राख्नुहोस् र नियमित व्यायाम गर्नुहोस्। एउटा घनिष्ट आफन्तलाई अझ बढी स्याहार चाहिन्छ तर उ सहयोगी र प्यारो हुनेछ। प्रेममा भएको निराशाले तपाईंलाई निरुत्साहित गर्ने छैन। कला र थिएटरसँग जोडिएकाहरूले आफ्नो रचनात्मक कार्यलाई श्रेष्ठता दिनको लागि धेरै नयाँ अवसर पाउनुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। आफ्नो जोडीको अशिष्ट व्यवहारले आज तपाईंलाई केही कष्ट हुन सक्छ।
वृष :तपाईं पर्याप्त आराम लिइरहेको छैन भने तपाईंले अत्यन्तै थकित महसुस गर्नुहुनेछ र अतिरिक्त आराम आवश्यक हुनेछ। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्। टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ। आफ्नी प्रेमीकाको उट्पट्याङ्ग व्यवहारले तपाईंको मुड उदास बनाउन सक्छ। आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् – तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य गडबड भएकोले आज तपाईंको काममा केही समस्या हुन सक्छ।
मिथुन :हावामा महल निर्माण गर्नाले तपाईंलाई फाइदा हुने छैन। तपाईंले परिवारको आशा पूरा गर्नको लागि केही काम गर्नुपर्छ। आज तपाईंको समर्पण र मेहनतले पहिचान पाउनेछ र तपाईंको लागि केहि आर्थिक इनाम ल्याउनेछ। साँझको लागि रोमाञ्चक योजना राखेर तपाईंका मित्रहरूले तपाईँको दिन रोशन गर्नेछन्। विगतका रमाइला सम्झनाहरुले तपाईंलाई व्यस्त राख्नेछ। तपाईंको व्यापारिक भावना र बातचीत गर्ने क्षमताले फाइदा दिनेछ। आफ्नो जोडीसित तपाईं आज फेरि प्रेम गर्नुहुनेछ किनकि उनी यसको लागि योग्य छन्।
कर्कट :साथीलाई केही गलत अर्थ लाउनाले तपाईंको लागि अप्रिय प्रतिक्रिया आउन सक्छ – कुनै पनि निर्णय पारित गर्नु अघि सन्तुलित दृष्टिकोण बनाउनुहोस्। बच्चाहरुले आफ्नो उपलब्धिले तपाईंलाई गर्व महसुस गराउनेछन्। तपाईंको झ्यालमा फूल राखेर आफ्नो प्रेम देखाउनुहोस्। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। यो दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको लागि साँच्चै ठूलो छ। आफ्नो साथी थाहा छ तपाईं उहाँलाई प्रेम कति गरौं।
सिंह :तपाईंको व्यक्तिगत समस्याले मानसिक आनन्द बर्बाद गर्न सक्छ तर आफैलाई यी दबाबबाट बचाउनको लागि रोचक कुराहरू पढेर केही मानसिक व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक सुधार निश्चित छ। तपाईंको आकर्षक प्रकृति र सुखद व्यक्तित्वले तपाईंलाई नयाँ मित्र बनाउन र सम्पर्क सुधार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। काम दबाब बढ्नाले मानसिक उथलपुथल र कोलाहल। दिनको उत्तरार्द्धमा आराम मिल्नेछ। कुनै पनि साझेदारी गर्नु अघि आफ्नो भित्री भावनालाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईंको जोडीले आज तपाईंलाई केही हानि पुर्याउन सक्छ।
कन्या :आनन्ददायी यात्रा र सामाजिक भेलाहरूले तपाईंलाई तनाउमुक्त र खुसी राख्नेछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग आफ्नो तालमेल सुधार गर्न सही मौका हुनेछन्। प्रेम परमेश्वरको उपासना गरेजस्तै हो; यो धेरै धार्मिक हो साथै आध्यात्मिक पनि हो। तपाईंलाई यो आज थाहा हुनेछ। आज आराम गर्नको लागि केही समय पाउनुहुनेछ – तर बाँकी रहेका कामले तपाईंलाई बस्न दिनेछैन। तपाईं किनमेलको लागि जानुभयो भने धेरै खर्चालु नहुनुहोस्। आज तपाईंले गुलाब झन रातो र नील लोहित झन नीलो देख्नुहुनेछ किनकि प्रेमको नशाले तपाईंलाई माथि पुर्याएको छ।
तुला :आफुलाई राम्रो बनाउन आत्म-सुधार परियोजनाहरुमा आफ्नो ऊर्जा प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले धेरै अनपेक्षित स्रोतहरूको मार्फत कमाउने सम्भावना छ। तपाईं कामले साह्रै तनाउ दिएकोले परिवारका आवश्यकताहरू र खाँचाहरूलाई बिर्सिनु हुनेछ। तपाईंको उदास जीवनले तपाईंको जोडीलाई तनाउ दिन सक्छ। व्यापार साझेदारले सहायतापूर्ण व्यवहार गर्नेछन् र तपाईंले सँगै रहल काम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको जोडीले नभएको वैवाहिक जीवन बारेमा तपाईंलाई परेशान गर्न सक्छन्।
वृश्चिक :पत्नीले तपाईंलाई खुशी बनाउन सक्छिन। अचल सम्पत्ति र वित्तीय कारोबारका लागि राम्रो दिन हो। परिवारमा भएको समारोहमा नयाँ मित्र बनाउनु हुनेछ। तर चयन गर्दा सावधान हुनुहोस्। असल मित्रहरू तपाईंले सधैं संरक्षण गर्न चाहनुहुने धन जस्तै हुन्। तपाईंकी प्रियतमाले पूरा दिन नराम्ररी तपाईंको सम्झना गर्नेछिन्। एउटा आश्चर्य मिलाउनुहोस् र यो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर दिन बनाउनुहोस्। बाँकी रहेका परियोजना र योजनाहरू अन्तिम आकार लिन उत्प्रेरित हुनेछन्। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। विवाह पछिको प्रेम गाह्रो झैं लाग्छ, तर यो दिनैभरि तपाईंलाई भइरहेको छ।
धनु :तपाईंको आशा धेरै सुगन्धित र अचम्मलाग्दा फूल जस्तै फुल्नेछ। अरू मान्छेको सुझाव सुन्ने र काम गर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकाव हुनेछ। कसैको लागि व्यापार र शिक्षा लाभ हुनेछ। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
मकर :घर बाहिरका गतिविधिहरु आज गलाउने र तनाउपूर्ण हुनेछन्। तपाईंका प्रियजनहरूसँग तपाईंको सम्बन्ध बिग्रिने मुद्दालाई बढ्न नदिन सक्ने सबै भन्दा सही मान्छे तपाईं हुनुहुन्छ। तपाईंका प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन् – पुर्याउन नसक्ने प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। लघु अवधिका कार्यक्रममा आफुलाई संलग्न गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई नवीनतम प्रविधिहरू र कौशल सिक्न मद्दत गर्नेछ। आज, आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई आफ्नो जीवनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरामा सहयोग दिनेछन्।
कुम्भ :भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो घरको जिम्मेवारीमा बेवास्ता गर्नुभयो भने तपाईंसँग बस्ने कसैलाई नराम्रो लाग्नेछ। प्रेमी जीवन आज विवादास्पद हुन सक्छ। तपाईंले अप्रत्याशित स्रोतबाट महत्त्वपूर्ण निमन्त्रणा प्राप्त गर्नु हुनेछ। आज आफ्नो जोडीले कठिन परिस्थितिमा तपाईंलाई सहयोग गर्नमा धेरै चासो नदेखाउन सक्छन्।
मीन तपाईंले आफ्नो भावना नियन्त्रण गर्नुहोस् र सकेसम्म छिट्टै डरबाट छुटकारा हुनुहोस्, किनकि कार्डमा स्वास्थ्यमा तत्काल प्रभाव पर्ने र राम्रोसँग स्वास्थ्यको आनन्द लिने तपाईंको बाटोमा रहेको अवरोध बढ्ने सम्भावना छ। तपाईंको अवस्था र आवश्यकता बुझ्ने घनिष्ठ मित्रसँग बाहिर जानुहोस्। तपाईंले आज प्रेमको मीठो चकलेटको स्वाद प्राप्त गर्नु हुनेछ। आफ्नो काममा ध्यान दिनुहोस् र भावनात्मक तर्कमा स्पष्ट रहनुहोस्। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
गम्भीर बिरामी बढ्दै, रेम्डेसिभिरको अभाव